Manchester United oo go’aan ka gaartay Jose Mourinho – Bandhiga
Manchester United oo go’aan ka gaartay Jose Mourinho
Waqtigii Jose Mourinho ee kooxda Manchester United ayaa sii dhamaanaya, waxaana ay madaxda sare ee naadigu dhamaantood lumiyeen kalsoonidii ay ku qabeen, kuwaas oo ugu dambayn go’aamiyey in albaabka uu ka baxo macallinka reer Portugal.
Sida uu qoray wargeyska The Sun ee kasoo baxa UK, tababare Jose Mourinho ayaa shaqadiisa waayi doona toddobaadka soo socda marka ay Manchester United booqato Newcaste United, halkaas oo natiijada kasoo baxda ay si degdeg ah uga falcelin doonaan madaxda sare oo uu hormood u yahay Woodward oo isaga laftiisa cadaadis lagu saarayo eriga Mourinho.
Manchester United ayaa la fahamsan yahay in go’aanka eriga ay degdeg u qaadan doonto isla marka ay helaan tababaraha xilka kala wareegaya oo markii hore la saadaalinayey inuu noqon doono Zinedine Zidane, hase yeeshee ay hadda soo baxayso in aanu doonaynin inuu xilligan la wareego naadiga kala daadsan, iyadoo ay warar kalena sheegayaan inuu Juventus kusii jeedo.
Maamulka sare ee Manchester United ayaa waxa ku qasbaya inay eryaan Mourinho laba sababood oo waaweyn oo aan suurtogal ka dhigaynin inuu sii joogo, kuwaas oo midka koowaad tahay natiijooyinka liita ee ay kooxdu soo hoynayso iyo arrinka labaad oo ah khilaaf ba’an oo u dhexeeya ciyaartooyada iyo Special One.
Guul-darradii Sabtidii kasoo gaadhay West Ham iyo khasaarihii weynaa ee ay kaga hadheen tartanka Carabao Cup oo ay Derby County oo heerka labaad ahi ka reebtay, ayaa waxay Manchester United u diiwaangelisay rikoodhkii ugu xumaa ee dhinaca natiijooyinka tan iyo sannadkii 1989-kii.
Halyeeyadii hore ee Red Devils ee Paul Scholes iyo Rio Ferdinand ayaa cusbo sii mariyey nabarka dawada loo la’yahay ee Mourinho iyo xaaladdiisa Old Trafford, waxaanay isku waafaqeen inuu doonayo in shaqada laga eryo, iyagoo si gaar ah u eegay hab-dhaqankiisii Sabtidii markii ay la ciyaarayeen West Ham.
Si kastaba ha ahaatee, natiijada ay Manchester United ka keento kulanka Sabtida ay ugu safrayso Newcastle United ayaa soo dedejin doonta in la eryo, amaba inuu maalmo kale cimriga sii dheeraysto.